Juventus oo SHAN xiddig suuqa dhigeysa xagaagan… (Dybala oo ku jira & CR7 oo…) – Gool FM
Juventus oo SHAN xiddig suuqa dhigeysa xagaagan… (Dybala oo ku jira & CR7 oo…)
(Turin) 29 Maarso 2021. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa dooneysa inay xagaagan suuqa dhigto ciyaartoy badan oo ka mid safkeeda koowaad.
Iyadoo uu shaki badan ku hareersan yahay mustaqbalka Cristiano Ronaldo, misena kabtanka Portugal kuma jiro xiddigaha ay Bianconeri dooneyso inay iska iibiso xagaagan.
Jariiradda Mirror ayaa baahisay shan ciyaaryahan oo xagaagan laga iibin doono garoonka Allianz Stadium.
Liiskan ka kooban shanta ciyaaryahan ayaa waxaa hoggaaminaya weeraryahanka reer Argentina ee Paulo Dybala kaasoo qandaraaska uu kula jiro Juve uu dhici doono xagaaga 2022.
Laacibkan ayaa si aad ah loola xiriirinayaa kooxda Manchester United, waxaana xagaagan la sadaalinayaa inay labada naadi heshiis is dhaafsi ah ay isku weedaarsan doonaan Paul Pogba iyo Dybala.
Alex Sandro ayaa ah xiddiga labaad ee lagu soo warramayo inuu xagaagan ka tagayo Turin, waxaana laacibka reer Brazil uu kula joogaa Juventus qandaraas dhacaya 2023, hase ahaatee, kooxda Taliyaaniga ka dhisan ayaa xiddigan iibineysa si ay ula soo saxiiixato difaaca Chelsea gadoodka ka ah ee Emerson Palmieri.
Liiskan waxaa saddex ku ah laacibka garabka midig ka ciyaara ee Juan Cuadrado kaasoo lumiyay booskiisa koowaad kulammadii ugu dambeeyay.
Tababare Andrea Pirlo ayaa xiddigan kusiga keydka u diray tan iyo markii uu bilaabay isticmaalka shaxda 3-5-2, taasoo la micno ah inuusan qayb ka ahayn qorshaha macallinka Taliyaaniga ah.
Dhanka kale, laacibka reer Colombia ayaa ku jira sanadkii ugu dambeeyay qandaraaskiisa Allianz Stadium, waxaana loo badinayaa inuu xagaagan ka dhaqaaqi doono naadigiisa.
Sidoo kale, Aaron Ramsey ayaa qayb ka ah xiddigaha laga fasaxayo Turin, waxaana laacibkan ku jira bandhigga liita uusan qayb ka ahayn qorshaha Pirlo.
Sidaas darteed, xiddiga khadka dhexe ka ciyaara ayaa lala xiriirinayaa ku laabashada horyaalka Premier League iyadoo Liverpool, West Ham United iyo Tottenham Hotspur ay bartilmaameed ka dhiganayaan laacibkii hore ee Arsenal kaasoo qaab bilaash ah ku yimid Turin xagaagii 2019.
Diiwaankan waxaa shan ku ah Adrien Rabiot oo isna beeca xorta ah ugu soo biiray Juve isla xagaagaas, waxaase uu xiddigan ku guuldarreystay inuu bandhig heer sare ah ka sameeyo horyaalka Serie A kooxda difaacaneysa, sidaas darteed, waxaa lagu soo warramayaa inuu qayb ka yahay xiddigaha ay Juventus iska iibineyso.
"Mourinho waxa uu qaaday Champions League isagoo aanan kubbad ciyaarin" - Xiddig u soo ciyaaray Inter Milan